Mellow! - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguΚαραλη
Indlu ihonjiswe ngeetoni zakudala kunye nezanamhlanje njengoko zihambelana noyilo lwayo. Ukukhanyisa kwanele kuwo onke amagumbi. Nangona ikhanya kakhulu. Ukusuka kwintendelezo unokubona ulwandle kunye nezibuko lesixeko. Ukuhlala kweendwendwe kuya kukhululeka kakhulu kwaye umoya wethu ube nobuhlobo kunye nokubuka iindwendwe
Le ndlu inegumbi lokuhlala elikhulu elithandekayo eligcwele iifestile ezenza ukuba kukhanye kakhulu. Inomgangatho ophezulu kunye nemibala emihle. Amagumbi okulala amakhulu anamagumbi amakhulu kunye nentendelezo entle enezityalo ezahlukeneyo ezinevumba elimnandi zenza le ndlu yonwabele iiholide zakho apho.
Elumelwaneni kukho icawa yaseAgios Ioannis Kalyvitis. Ngapha koko, kukho iimarike ezincinci ezikufutshane, indawo yokulungisa iinwele, isikolo se-ballet, isikolo samabanga aphantsi kunye nesikhululo samapolisa. Zonke ziphakathi kweemitha ezingama-500
Umbuki zindwendwe ngu- Καραλη
Ndifumaneke kwizinto ezifunwa ngabahlali kodwa ndikhetha ukuba nobulumko.Emva kokunika izitshixo ngolwazi oluthile malunga nesiqithi okanye into abaza kundibuza yona, bayakonwabela ukuhlala kwabo kwindawo yethu.
Inombolo yomthetho: 00000631309